बलिउड नायिका विद्या बालन गर्भवतीFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
बलिउड नायिका विद्या बालन गर्भवती
अहिले बलिउड नायिका विद्या बालन गर्भवती भएको कुरा बजारमा सुनिन थालेको छ । तर विद्या स्वयंमले भने यसलाई ठाडै नकारेकी छिन् ।
एउटा वेवसाइटलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनिन्-‘म यो कुरा सुन्दा-सुन्दा हैरान भइसकेकी छु । के म दुखाईको कारणले क्लिनिक जान सक्दिनँ ? विवाहपछि कुनै महिला क्लिनिक जानेवित्तिकै गर्भवती नै भएको हुनुपर्छ ?’
पटक-पटक क्लिनिक धाइरहेको देखिएपछि विद्या गर्भवती भएको लख काटिएको थियो । पछिल्लो समय उनी अलि मोटाउनुले पनि यो अनुमानलाई मलजल गरेको थियो ।
विद्याले रिसाउँदै भनिन्-‘विवाहित महिलाबाट सधै बच्चाकै अपेक्षा किन गरिन्छ ? बच्चाको निम्ति मानिसहरुमा किन यति धेरै कौतुहलता छ ? म कुनै बच्चा बनाउने मेशिन होइनँ । संसारमा जनसंख्या धेरै बढिरहेको छ । यस्तोमा यदि कसैले बच्चा पाएन भने पनि के फरक पर्छ ?’
बारम्बार गर्भवतीको विषयमा सवाल सोधिएको भन्दै विद्याले अगाडि भनिन्,-‘मलाई लाग्दैन कि यो विषयमा म र मेरा श्रीमान् सिद्धार्थ राय कपुरबाहेक अरु कसैले सोच्नुपर्छ । यो हाम्रो प्राइभेट कुरा हो । तर, हाम्रो देश र छिमेकी र नातेदारले हमेशा यो विषयमा प्रश्न गरेर हैरान पार्छन् ।’
‘मलाई एकजना अंकलले बिहेलगत्तै भनेका थिए कि अर्कोपटक तिमीहरुलाई तीन जना भएको हेर्न चाहन्छु । मैले हाँसेर टारेँ । त्यतिबेला त हामीले हनिमुनमा कहाँ जाने भनेरसम्म सोचिसकेका थिएनौं ।’ विद्याले भनिन् । विद्या र सिद्धार्थको बिहे सन् २०१२ मा भएको थियो । आफूहरुको बिहेमा एउटा फोटो पनि नखिचिएको दावी विद्याले गरेकी छिन् ।